fampiharana ara-pitsaboana fanasitranana fampidirana ho an'ny indostrian'ny fitsaboana
Fampiharana fampiroboroboana ara-pitsaboana sy fitsaboana nify ho an'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny nify
Fanamorana ny induction dia be mpampiasa ao anatin'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny nify. Ireo mpanamboatra fitaovam-pitsaboana dia mahazo tombony amin'ny teknolojia fanamafisana fampidirana. Manome madio, fohy, azo averina, ary azo antoka tontolo iainana noho ny tsy fisian'ny lelafo misokatra na fandefasana poizina. Izy io dia ampiasaina amin'ny laboratoara kely ary koa toeram-pamokarana lehibe.
Tao anatin'izay taona faramparany dia mihamitombo hatrany ny andrim-pikarohana momba ny fitsaboana mampiasa hafanana fampidirana ho an'ny fikarohana momba ny fitsaboana ny nanoparticle sy ny hyperthermia elektromagnetika. HLQ DW-UHF fitaovam-pandrefesana fampidirana dia natao manokana miaraka amin'ity fampiharana ity ao an-tsaina. Ny rafi-panafenana fampidirana HLQ dia ampiasaina amin'ny anjerimanontolo sy toeram-pikarohana manerana an'izao tontolo izao.
Ahoana ny fampiasana ny heating induction amin'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny nify?
Fikarohana sy fitiliana fitsaboana nanoparticle sy hyperthermia
Fampidirana nify sy implants fitsaboana
Catheter tipping mba hamorona ny tendron'ny catheters ara-pitsaboana
Fanamafisana ny fifandraisana amin'ny orinasa mpamokatra fanafody na biomédical
Fitsaboana hafanana amin'ny alika fahatsiarovana ho an'ny fampiharana ara-pahasalamana
Fanjaitra sy fitaovana fandidiana hafanana ary fitehirizana hafanana
Fanafody na fanafanana plasma amin'ny rà ho an'ny fitaovana IV
Rafitra fanamafisana induction dia ampiasaina amin'ny dingana maro ao anatin'ny indostrian'ny fitsaboana. Ny karazana rindranasa fanamafisam-peo induction izay ho hitanao dia ny famolavolana tendro-catheter, ny fametahana borosy nify, ny plastika amin'ny fifamatorana vy ary maro hafa.
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana Induction Heating ao anatin'ny indostrian'ny fitsaboana. Ny tombony dia ny fizotran'ny fanamainana tsy misy ifandraisany izay mahomby amin'ny angovo ary dingana manafana faran'izay malaza. Ny fanamafisana induction dia fomba iray haingam-pandeha hanafenana ireo singa ao anaty fomba mampionona. Hanampy amin'ny fanatsarana ny famokarana famokarana sy fanatsarana ny kalitao izany.
Ny vahaolana coil induction dia manana fahalalana an-taonany maro ao amin'ny indostrian'ny fitsaboana manohana ny mpanjifa amin'ny asa fampandrosoana vaovao ary manampy amin'ny volavola coil vaovao ho an'ireo singa vaovao. Ny induction coil Solutions dia nanampy orinasa marobe manga-chip amin'ny fitazonana ny tsipika famokarana mihazakazaka na amin'ny coil Induction Heating vaovao, na ny fanamboarana Induction Heating Coil.
Vahaolana fanamboarana fitaovana fitsaboana sy fitsaboana nify
Ao amin'ny toekarena manerantany mihombo ankehitriny, ny orinasa mpamokatra fitaovana fitsaboana dia tsy mitsahatra mitady fomba hampihenana ny vidin'ny famokarana ary hanafaingana ny fotoana an-tsena. Mandritra izany fotoana izany dia tena ilaina tokoa ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny tsy fitoviana amin'ny famokarana; tsy mety hisy ny hitsin-dalana raha ny ain'ny marary sy ny fiadanany no tandindomin-doza.
Ireo mpanamboatra fitaovana fitsaboana dia mihodina amin'ny haitao fampiroboroboana mandroso hanampiana ny famokarana, ny vidiny ary ny tanjona kalitaony. Ny fanamafisana induction dia fomba haingana, madio, tsy mifandray amin'ny fampidirana hafanana ho an'ny karazana metaly manatevin-daharana sy fangatahana hafanana. Raha ampitahaina amin'ny convection, ny taratra, ny lelafo misokatra na ny fomba fanafanana hafa, ny fanamafisana induction dia manome tombony lehibe.
Fampitomboana tsy tapaka miaraka amin'ny fifehezana ny mari-pana amin'ny fanjakana sy ny rafitra fanaraha-maso loop loop
Ny famokarana avo indrindra amin'ny asan'ny sela; tsy misy fotoana mandemana na tsingerina milamina lava
Fanatsarana kalitao miaraka amin'ny Warpage vokatra ahena, fanodinkodinana ary fandavana ny tahan'ny
Fiainana maharitra miaraka amin'ny hafanana manokana amin'ny tranokala nefa tsy manafana faritra manodidina
Feo eo amin'ny tontolo iainana tsy misy lelafo, setroka, hafanana mandoto, famoahana poizina na tabataba mafy
Mihena ny fanjifana angovo misy fiasa mahomby hatramin'ny 80%
Anisan'ireo fangatahana fitaovana fitsaboana maro ho an'ny fanafanana fampidirana:
Fametahana fantsona Incoloy ao anaty atmosfera miaro
Miaraka amin'ny famatsiana herinaratra 20kW, induction heating dia azo ampiasaina hanafanana ny fantsom-by hatramin'ny 2000 ° F amin'ny fampidirana an-tany amin'ny 1.4 santimetatra isan-tsegondra.
Singa orthodontika vy
Ho an'ity fampiharana ity dia nampiasainay ny rivo-piainana tsy mitongilana hanakanana ireo andiany orthodontic amin'ny 1300 ° F ao anatin'ny 1 segondra
Fametrahana hafanana Nitinol Medical Subtends
Ny fanamafisana induction dia nampiasaina hanamafisana ny stents ara-pitsaboana amin'ny mandrel mba hametrahana habe araka ny tokony ho izy ao anatin'ny roa minitra amin'ny 510 ° C
Faritra iraisana telo mitambatra eo amin'ny fiaramanidina mpitsabo nify
Amin'ny ankavanana induction heating coil design, azo atao ny manasongadina ny tonon-taolana telo indray mandeha. Tao anatin'ny folo segondra, sendra telo tao amin'ny fivorian'ny jet prophy nify nohafanaina hatramin'ny 1400 ° F ho an'ny fiompiana brazing miaraka amin'ny fanatsarana ny vokatra ary ny fihenan'ny fotoana tsingerina.
Fametahana hafanana mpampitohy herinaratra varahina misy kofehy ao anaty akorany plastika
Ny valiny mifanaraka sy azo averina dia tratra tamin'ny 500 ° F tamin'ny fihodinana hafanana 10 segondra. Ny mpampitohy herinaratra dia nifamatotra mafy tamin'ny akorany vita amin'ny plastika tsy nisy flashing na discolination.
Sokajy Technologies Tags fanafanana ara-pahasalamana, HF miteraka fitsaboana, fampidirana brazing fitsaboana, fanafanana nify fampidirana, fampidirana nify, fitsaboana ara-pahasalamana fampidirana, fampidirana fanafody fitsaboana nify, indostrian'ny fitsaboana fanafanana induction, milina fitsaboana fanafanana induction, heater ara-pitsaboana fampidirana, fanafanana fampidirana fanafody Post Fikarohana